လူမှုမီဒီယာတွင် #Hashtag ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖန်တီးနည်း | Martech Zone
ပြိုင်ပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်လက်ဆောင်တစ်ခုရတဲ့အခါ ပုံစံပုံစံများ အလားအလာရှိသောသင်တန်းသားများကိုပယ်ရှားနိုင်သည်။ hashtag ပြိုင်ပွဲသည် ၀ င်ရောက်ရန်အတားအဆီးများကိုဖယ်ရှားသည်။ သင်၏ပါ ၀ င်သူများသည်သင်၏ hashtag ကိုသာသုံးရန်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းကိုသူတို့၏မျက်လုံးများကိုဖမ်းစားနိုင်သောဖန်သားပြင်တွင်စုစည်းလိမ့်မည်။
ShortStack hashtag ပြိုင်ပွဲများသည်သင့်အား Instagram နှင့် Twitter မှ hashtag entries မ်ားအားပရိသတ်များနှင့်ပိုမိုထိတွေ့စေရန်မြှင့်တင်နေစဉ်ခွင့်ပြုသည်။
hashtag ပြိုင်ပွဲသည်အသုံးပြုသူမှထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာများကိုစုဆောင်းရန်၊ အမှတ်တံဆိပ်အသိပညာတိုးပွားစေရန်နှင့်ပရိသတ်အသစ်တစ်ခုကိုရရန်အတွက်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်အလယ်အလတ်အဆင့်ရှိသော UGC ကိုဖော်ပြရန် ပို၍ လွယ်ကူပြီးမည်သူမဆိုသင်၏ပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်ရန် hashtag ကိုသုံးနိုင်သည်။ UGC လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်ဖောက်သည်များဖြစ်လာနိုင်သည်။
သင်သည် hashtag ပြိုင်ပွဲများကို landing page မလိုပဲပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုစုဆောင်း။ ပြသလိုသူများအတွက် ShortStack တွင်လှည့်ကွက်များလုပ်ရန်တင်းပလိတ်အချို့ရှိသည်။
ShortStack ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ စာသားများနှင့်သုံးစွဲသူအမည်များကိုစုဆောင်းပြီးမည်သည့် hashtags (နှင့် Instagram အတွက်ပရိုဖိုင် @mention) နှင့်သင်စုစည်းလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်သည်အကြောင်းအရာကိုအလယ်အလတ်နှင့်ပြသပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မဲပေးခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းစွမ်းရည်များနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုသည်။
အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာ Instagram နှင့် Twitter ပေါ်တွင်သင်စုဆောင်းထားသော UGC ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ သင်၏စီးပွားရေးကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့် UGC ကိုအသုံးဝင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်းတို့အတွက်အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ရန် ShortStack ၏အခွင့်အရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ShortStack သည်သင်၏အောင်မြင်သူများကိုရွေးချယ်ရာတွင်လွယ်ကူစေသည်။ hashtag ထည့်သွင်းမှုတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ပြီးနောက်၊ Entries မန်နေဂျာ ချက်ချင်းပဲဒါကြောင့်ငါတို့နှင့်အတူအနိုင်ရ generate နိုင်ပါတယ် ကျပန်း Entry Selector.
ShortStack နှင့်အတူ Hashtag ပြိုင်ပွဲဖန်တီးနည်း
hashtag စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုဖွင့်တဲ့အခါ၊ ShortStack ရဲ့မဲပေးခြင်းဝစ်ဂျက် entries တွေကိုပြသရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်အသုံးပြုသည်။ Voting Widget သည် Feed မှပို့စ်များကိုသိမ်းဆည်းထားသောစာရင်းတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
Twitter မှာ Hashtag ပြိုင်ပွဲတခုဖန်တီးနည်း
သင်၏ Twitter hashtag feed ကိုတည်ဆောက်ရန်အဆင့်များ -
သင်၏ Dashboard မှနှိပ်ပါ feeds ထိပ်ဆုံးမှာ။
အပြာရောင်ကိုနှိပ်ပါ Feed အသစ် ခလုတ်ကို။
သင်တပ်ဆင်လိုသောမည်သည့် feed အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ရွေးချယ်ပါ တွစ်တာ.
အကယ်၍ သင်မဖြစ်သေးလျှင် pop-up ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဤ pop-up သည်တွစ်တာကိုဖွင့်ပြီးသင်ဤ tool အတွက်သင်၏ Twitter account ကို ShortStack ကိုခွင့်ပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ လော့အင်ဝင်ရန် (လိုအပ်ပါက) ထို့နောက်ကိုနှိပ်ပါ App ကိုခွင့်ပြု ဆက်လက်ခလုတ်ကို။
သင်၏ထည့်သွင်းမှုအသစ်ကိုအမည်ပေးရန်ပေးထားသောအကွက်များကိုသုံးပါ။ ဒါ့အပြင်ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုရွေးချယ်ပါ။ စာရင်းအသစ်များကိုစာရင်းအသစ်ထဲသို့ထည့်သွင်းလိုပါကရွေးချယ်ပါ စာရင်းအသစ်ကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးပါ - မဟုတ်ပါက drop-down မှရှိပြီးသားစာရင်းကိုရွေးချယ်ပါ။
ယခုမည်သည့်တွစ်တာအမျိုးအစားကိုသင်ဖန်တီးလိုသည်ကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မည်။ ရွေးချယ်ပါ hashtags ကို.
ပေးထားသောကွက်လပ်၌သင်ထည့်သွင်းလိုသော hashtag ကိုထည့်ပါ။ hashtags များစွာကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တစ်ခုစီကိုကော်မာနဲ့ခွဲပါ။ အကယ်၍ သင်သည် hashtags မျိုးစုံကိုအသုံးပြုပါက feed သည်ပေးထားသော hashtags များအားလုံးကိုအသုံးပြုသော entries များကိုသာဆွဲလိမ့်မည်ကိုသတိပြုပါ။ စာမူတစ်ခုထဲသို့ထည့်ရန်မည်သည့်အရာပါ ၀ င်ရမည်နှင့်အတူစာမူတစ်ခုအားညာဘက်တွင်ပြလိမ့်မည်။
သင်တို့သည်လည်းနှိပ်နိုင်သည် အားလုံး entries တွေကို သင်ထည့်သွင်းလိုသောအမျိုးအစားများကိုပြောင်းလဲရန် (သို့) ကိုနှိပ်ပါ manually သင့်ရဲ့ entries တွေကိုများအတွက်ခွင့်ပြုချက် Modes သာအကြားပြောင်းပါ။
ပြီးပြီဆိုရင်အပြာရောင်ကိုနှိပ်ပါ ဆက္သြား ခလုတ်ကို။
ထိုအရပ်မှ, စတင်နှင့်ရက်စွဲများနှင့်အချိန်ကိုထည့်သွင်း; ထို့အပြင်အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်သည် Twitter သုံးစွဲသူအမည်များကိုနာမည်ပျက်စာရင်းထဲသို့ထည့်လိုပါကသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူတစ် ဦး လျှင်အများဆုံးစာရင်းသွင်းလိုပါကကိုနှိပ်ပါ အဆင့်မြင့်ချိန်ညှိချက်များကိုပြရန်နှင့်ထိုအရပ်၌အပြောင်းအလဲများကိုပါစေ။ ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုနှိပ်ပါ သိမ်းပြီးထွက်ပါ.
Instagram တွင် Hashtag ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖန်တီးနည်း
သင်၏ Instagram hashtag feed ကိုတည်ဆောက်ရန်အဆင့်များ -
သင်တပ်ဆင်လိုသောမည်သည့် feed အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ရွေးချယ်ပါ Instagram ကို.
သင်၏ ShortStack နှင့် Facebook အကောင့်မရှိသေးပါကသင့်အား Facebook ထဲသို့ဝင်ရန်တောင်းဆိုသည့် pop-up တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါကသင်၏ Instagram အကောင့်ဖြစ်သော Facebook စာမျက်နှာသို့ admin မှဝင်ရောက်သည့်အကောင့်သို့ဝင်ရောက်ပါ။ ချိတ်ဆက်
အဲဒါပြီးပြီဆိုရင်တော့သင့်မှာ Pages စာရင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ Instagram account တစ်ခုပါဝင်လိမ့်မယ်။ သင်အသုံးပြုလိုသောခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ပေးထားသောကွက်လပ်၌သင်ထည့်သွင်းလိုသော hashtag ကိုထည့်ပါ။ hashtags များစွာကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တစ်ခုစီကိုကော်မာနဲ့ခွဲပါ။ အကယ်၍ သင်သည် hashtags များစွာကိုအသုံးပြုပါက feed သည်ပေးထားသော hashtags အားလုံး (နှင့်သင်၏ account tag) ကိုသာအသုံးပြုသည့် entries များကိုသာဆွဲလိမ့်မည်။ စာမူတစ်ခုထဲသို့ထည့်ရန်မည်သည့်အရာပါ ၀ င်ရမည်နှင့်အတူစာမူတစ်ခုအားညာဘက်တွင်ပြလိမ့်မည်။
သင် Instagram usernames များကို black list ထဲထည့်လိုပါကသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူတစ် ဦး လျှင်အများဆုံးစာရင်းသွင်းလိုပါကကိုနှိပ်ပါ အဆင့်မြင့်ချိန်ညှိချက်များကိုပြရန်နှင့်ထိုအရပ်၌အပြောင်းအလဲများကိုပါစေ။ ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုနှိပ်ပါ သိမ်းပြီးထွက်ပါ.
အဲဒီကနေပြီးသွားပြီ။ သင်သည် Feeds Manager သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးသင့်စာရင်းအသစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
ထုတ်ဖော်: ငါတို့တစ်ခုဖြစ်သည် Affiliate ShortStack ၏
Tags: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သံတမန်အသုံးပြုသူ -generated အကြောင်းအရာစုဆောင်းပါhashtag ပြိုင်ပွဲဟတ်ဟဲဘယ္လိုရေတို
Beauty Matching Engine - အွန်လိုင်းအလှအပရောင်းအားကိုတွန်းအားပေးသည့်ကိုယ်ပိုင် AI အကြံပြုချက်များ